Eye Care – Page5– Healthy Life Journal
Q. Floater အကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. မျက်စိမှန်ဘီလူးရဲ့ နောက်ဘက်မှာ Vitreous Cavity ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Vitreous အရည်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။ မျက်စိကိုကြည့်လိုက်ရင်...
အလှပြင်ရင်း မျက်စိအဆီဖုလေးတွေဖြစ်နေလို့ပါ . . .
မေး. ကျွန်မက မျက်စိကို အိုင်းလိုင်နာဆိုးတာ၊ အိုင်းရှဲဒိုးခြယ်တာတွေ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လားမသိဘူး၊ မျက်စိအဆီဖုလေးတွေ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်လို့စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ မျက်စိအဆီဖု မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ ရပါသလဲဆရာ။ ထူးထူး(သာကေတ) ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. မျက်စိအဆီဖုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်မှုအနေနဲ့...
ကြည့်လိုက်တိုင်း နှစ်ထပ်မြင်နေခြင်း (Double Vision)
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး- မျက်စိက ကြည့်လိုက်လို့ နှစ်ထပ်မြင်နေတဲ့ အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ- မျက်စိကကြည့်လိုက်လို့ နှစ်ထပ်မြင်နေတာ (Double Vision)ကို Diplopia လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။...
မျက်စိကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိစေသည့် နေ့စဉ် အမူအကျင့် ရှစ်မျိုး
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အခုခေတ်မှာ မျက်ကပ်မှန်တပ်ဆင်သူတွေက ရှားပါးတဲ့ ကူးစက်ပိုးဝင်မှုကြောင့် မျက်မမြင်ဖြစ်လုနီးပါး ထိခိုက်နေရကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူတွေက သတိပေးထားကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံက မျက်ကပ်မှန်တပ်ဆင်သူ ၄ သန်းခန့်ဟာ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အလေးထားခြင်းဖြင့် မျက်စိကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတယ်လို့ လန်ဒန်ကောလိပ်တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မျက်လုံးအတွက် အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ သုံးတဲ့အခါ မျက်စိထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဘာတွေဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. အလှပြင်ပစ္စည်းသုံးတဲ့အခါ မျက်စိထဲကို ဓာတုပစ္စည်း (Chemical)တွေ မဝင်အောင် ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။...
မျက်စိကို စစ်ဆေးသင့်သော ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက် လေးရပ်
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူအများစုက မျက်စိစစ်ဆေးမှုရဲ့ အရေးပါပုံကိုသိရှိပေမယ့် သိပ်အလေးမထားတတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူတွေက ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးအတွက် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုနဲ့ သွား၊ ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် ခြောက်လတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်သလိုမျိုး မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်စိကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းလေးရပ်ကို...
ကလေးများ မျက်စိတစ်ဖက်မှုန်ခြင်းကို ဂရုမစိုက်ပါက ပျင်းတွဲမျက်စိ ဖြစ်စေနိုင်
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးများ မျက်စိမှုန်ခြင်းကို မျက်မှန်မတပ်ပါက နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ပျင်းတွဲမျက်စိ (Lazy Eye) ဖြစ်နိုင်သဖြင့် အထူးအလေးထား ဂရုစိုက်ပေးသင့်ကြောင်း ရန်ကုန်၊ မျက်စိဆေးရုံကြီး၏ ပါမောက္ခဋ္ဌာနမှူးဖြစ်သူ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်းက ရှင်းပြသည်။ “ကလေးတွေမှာ မွေးစကနေ နှစ်နှစ်အရွယ်နဲ့ နှစ်နှစ်ကနေ...
အသက်ကြီးလို့ဖြစ်တဲ့ မျက်စိရောဂါတွေ ကင်းဝေးချင်ပါတယ်
မေး. ကျွန်တော့်အသက်က ၆၀ထဲ ရောက်လာပါပြီ။ စာဖတ်ရတာ ဝါသနာပါလို့ မျက်စိကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာ စိုးပါတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့အထိ မျက်စိမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာမကျရောက်အောင် ဘယ်လိုအချက်တွေ အဓိက လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အသက်ကြီးတဲ့အခါ မျက်စိမှာ...
အတွင်းတိမ်နှင့် ရေတိမ်ရောဖြစ်နေလျှင် အတွင်းတိမ်ခွဲလိုက်ပါက ရေဖိအား ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျနိုင်
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အတွင်းတိမ်ကမာပြီး ရင့်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ ရေတိမ်ဝင်သွားတဲ့ အခြေအနေဆိုရင် ဘယ်လို ကုသမှုပေး ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. အတွင်းတိမ်က မာကျောပြီး ရင့်နေတဲ့ အဆင့်မှာဆိုရင်...